Tababar loo qabtay qeybaha bulshada ee Beladweyne “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Tababar loo qabtay qeybaha bulshada ee Beladweyne “SAWIRRO”
Tababar ku saabsanaa Maareeynta mashaariicda, qorsheynta Istaraatiijiyadda, codsiga maalgelinta, Kormeerka, qiimeynta iyo Maamulka lacagta ayaa maanta ka furmay magaalada Beladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
munaasabaddii furitaanka tababarka oo ay ka qeyb galeen aqoonyahanno iyo qeybaha bulshada rayidka ee Beladweyne ayaa ahaa mid loogu talagalay in sare loogu qaado aqoontooda xagga doorashada, kaasi oo socon doono muddo labo cisho ah.
Cabdifataax Yuusuf Maxamed Madaxa Barnaamiyka ee Hay’adda Machadka Doorashooyinka ee hana qaadka demoqraadiyadda Afrika ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan (EISA) ayaa sheegay in tabarkan ay ugu talagaleen inay ka faa’iideystaan bulshada Degmada Beladweyne, isagoo xusay inay qorsheynayaan sidii magaalooyin horleh ay ugu qaban lahaayeen tababaro nuucaani oo kale ah.
“Waxan ka soo shaqeynay dalal badan oo Afrika ah kuwaasi oo ka socotay doorashooyin, haddda waxaa noo qorsheysan inaan ka hirgelinayo magaalooyin badan” ayuu yiri Cabdifataax.
Guddoomiyaha Degmada Beladweyne Macalin Cismaan Cabdi Qadaafow oo ka hadlay siminaarka ayaa sheegay in tani ay horseedeyso in bulshada meel hoose laga soo dhiso, lagana gudmo nidaamka magacaabista.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin oo furay tababarka ayaa sheegay in bulshada ay baahi weyn u qabto inay is doorato, waxaana uu ka qeyb galayaasha ka codsaday inay ka faa’iideystaan tababarka.
“Waxaan idinkugu baaqayaa inay aad ka faa’iideysataan tababarka oo aad noqotaan kuwii beri magaalada u horseedi lahaa in laga qabto doorasho meel hoose laga soo bilaabo” ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan.
Hay’adda Machadka Doorashooyinka ee hana qaadka demoqraadiyadda Afrika ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan (EISA) ayaa magaalooyinka Baydhabo iyo Gaalkacyo ku qabtay tababaro nuucaani oo kale ah.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Furay kalfadhiga 5-aad ee golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Koofur galbeed+Sawirro